About | UNOB Classified	Home
[U.N.O.B Home] Welcome, visitor! [ Register | Login ] PostaClassified!
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေသော Internet ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ မည်မျှကြီးမားကြောင်း ယခုစာဖတ်နေသူကိုယ်တိုင် သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ယခင်က ကမ္ဘာ အရှေ့ခြမ်းနှင့် အနောက်ဖက်ခြမ်း စာတစ်စောင်ပို့မည်ဆိုလျှင် လနှင့်ချီ၍ ကြာနိုင်သော်လည်း ယနေ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း Email ကိုအသုံးပြု၍ သိရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်မှာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များသာ ပြည့်စုံပါက Instant Video Messenger များကို အသုံးပြု၍ ရုပ်နှင့်အသံပါ တစ်ချိန်တည်း မြင်နိုင် ကြားနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့သတင်းအချက်အလက် များစွာကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ရှာဖွေရယူနိုင်ပြီး၊ Twitter နှင့် Facebook ကဲ့သို့သော Social Network များမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာ့နေရာ အရပ်ရပ်တွင် ပျံနှံနေသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအား တစ်ချိန်တည်းတွင် အလာဘ၊ သလာဘ ပြောဆိုနေနိုင်ပါသည်။ Digital Media များကို အကန့်အသတ်မရှိ အချင်းချင်း ဝေမျှနိုင်ပါသည်။
ဤသည်မှာ Network ၏ အကျိုး အာနိသင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Internet ဆိုသည်မှာ Global Network ဟု ပညာရှင်များက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Community ဆိုသည်မှာလည်း Network တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ အချင်းချင်း ချိပ်ဆက်ထားမှုကြောင့် အပြန်အလှန် သတင်းများ ဖလှယ်ခြင်း၊ အကူအညီပေးမှုများ ရှိခြင်းဖြင့် အချိန်တိုတို အတွင်း အလုပ်ပြီးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း အကူအညီပေးမှုများသည် ကျွန်တော်တို့ အားမှီခိုနေထိုင်လျက်ရှိကြသော မြန်မာပြည်ရှိ မိဘ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ များအား သွယ်ဝိုက် အကူအညီပေးရာလည်း ရောက်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာလျှင် အပြုဖက်မှ မြင်သောသူများရှိသလို၊ အပျက်ဖက်မှ မြင်သောသူများ လည်းရှိနေမည်သာဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ အကောင်းနှင့်အဆိုးကို ခွဲခြားကြည့်မြင်တတ်ရန်နှင့် မိမိလုပ်သင့် သည်များကို အမြင်ရှင်းရှင်းဖြင့် အလုပ်ပြီးအောင် လုပ်သွားရန်သာ အရေးကြီးပါသည်။ မိမိဖြင့် အမြင် မတူသူများကိုလည်း အပြစ်အမြင်ပဲ ပါဝင် လက်တွဲလာနိုင်ရန် အမြဲတံခါးဖွင့် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ပူပေါင်း တည်ဆောက်ကြမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ Community မှာတိုင်းတစ်ပါး လူမျိုးခြားများ အလယ်တွင် မျက်နှာမော့၍ နေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ နောက်လာမည့် မျိုးဆက်သစ်များက အမျိုးအတွက် ဂုဏ်ယူနိုင်စရာရှိမည်၊ ဂုဏ်ယူတတ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချင်းချင်း ” ဗမာတွေ အသုံးကိုမကျဘူး” “ဗမာကျင့် ဗမာကြံနဲ့” စသဖြင့် ကိုယ့်အချင်းချင်း ရှုတ်ချပြောဆိုမှုများကို တွေ့ကြရတတ်ပါသည်။ မည်မျှဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါသနည်း။ ဤသည်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်များ unobusa.org (Web Site) သက်တမ်းမှာ ယခုဆိုလျှင် ၆လ ကျော်မျှသာရှိသေးသော်လည်း ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံအပြားမှ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုမှုများကြောင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လာရောက်လည်ပတ်သူ ဦးရေ များပြားလာကြောင်း Web site စစ်တမ်းများအရ သိရှိရပါသည်။ နှုတ်မှသော်လည်းကောင်း၊ Email များမှသော်လည်းကောင်း၊ Comment section မှသော်လည်းကောင်း ဝေဖန်စာ၊ အကြံပေးစာများကို လက်ခံရရှိသည့်အတွက်လည်း လွန်စွာမှ နှစ်ထောင်းအားရမိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ များစွာကြိုးစားရဦးမည်ဟု နားလည်ထားသလို တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ အချိန်လု၍ ကြိုးစားကူညီကြသော အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သေးသူများကိုပါ UNOB အဖွဲ့ကြီးမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဤနေရာမှနေ၍ ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ UNOB အဖွဲ့ကြီးသည် မြန်မာပြည်မှ လာရောက်ကြကုန်သော အမျိုးသားထုတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည့် အတွက် မြန်မာပြည်ဖွားမှန်လျှင် မည်သူ့ကိုမဆို ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း ထပ်မံဖေါ်ပြလိုပါသည်။ အားလုံးညီညီညာညာ ပါဝင်လက်တွဲကြမည်ဆိုလျှင် လူမှုအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်များမှ သက်သေပြလျက်ရှိပါသည်။
ယခုလောလောဆယ်အချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ U.S. Burmese Community အတွင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းလမ်းညွှန် (Job Finder and Web Classified) အစီအစဉ်သစ်တစ်ခု UNOB Web Site ပေါ်တွင် တိုးချဲ့ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်အကိုင်ပေးနိုင်သူများမှ ဤ Web site ၏ Jobs ကဏ္ဍတွင်လာရောက် ကြေငြာနိုင်ပါမည်။ လိုအပ်သော Information အချို့ကိုဖြည့်စွက်၍ Submit လုပ်ရုံမျှဖြင့် ချက်ချင်း Web Site ပေါ်တွင် ကြေငြာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလိုသူများမှ ထိုကဏ္ဍကို ကြည့်၍ မိမိစိတ်ဝင်စားသော အလုပ်ရှိလျှင် လုပ်ငန်းရှင်များထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ မိမိမှအရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ချင်သော ပစ္စည်း (ဥပမာ-အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ကား၊ ကွန်ပျူတာ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း) စသဖြင့် လာရောက်ကြေငြာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ၀န်ဆောင်မှုသည် မြန်မာလူမျိုးများ၏ အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ( အခမဲ့သက်သက် ) သာဖြစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ဟောင်းမှ အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ လာမည့်နှစ်သစ်တွင် အများအကျိုးပိုမို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွည်ချက်များ ထားရှိပြီး မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်အား ကြိုဆိုပါကြောင်း ဖေါ်ပြလိုက်ရပါသည်။
[U.N.O.B] UNOB Classified © 2013 All Rights Reserved. Powered by ClassiPress.